UBONGA UXHASO LWEMINYANGO YETHEKU UMFELANDAWONYE WASEMZINYATHI – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Jun 12, 2020 136
Usihlalo we ILangabi Elingacishi uMnuz Philani Magwaza, Mnuz Mlungisi Ngcobo isekela, no Nksz Thembi Ngcobo nabaphathiswa uNomusa Dube Ncube no Peggy Nkonyeni .Amalunga angekho esithombeni uNksz Thembekile Ngcobo
UKUBUKA isimo sempilo yentsha eningi kuleli engasebenzi kanye nendawo abahlala kuyo, kwenza ukuba bafikelwe umqondo wokusungula umfelandawonye wezolimo. Lentsha yaseMzinyathi, enyakatho yeTheku kuwadi 3 ithi basebenze kanzima ukuze bafike kulelizinga abakulo.
“Sabuka isimo sentsha eningi endaweni nokusweleka kwamathuba omsebenzi sahlangana saya kocela umhlaba enkosini yendayo Inkosi M Ngcobo wasinika. Kwadingeka ukuba siwulungise ukuze ulungele ukutshalwa nokwaba inselelo enkulu njengoba kwakuneziphunzi esasingeke sikwazi ukuzisiphula ngezandla namageja,” kusho uMnuz Magwaza ongusihlalo womfelandawonye Ilangabi Elingacishi.
Uthi bacela usizo kumasipala weTheku emnyagweni we Agri-Ecology nowabaxhasa ngeTLB yabasusela iziphunzi yaphinde yalima yonke indawo ababezotshala kuyo engango 2 hectors. “Kusukela ngonyaka ka 2015 esaqala ngawo kuze kube unyaka odlule besitshala singabiyile. I Agri-Ecology isisize ngezinto eziningi njengoba sakwazi ukutshala i butternut, baphinde basithengela nekhontena (container) ebesibeka kuyo izimpahla nesivuno. Lekhontena ibifana nesikhungo lapho sigcina khona zonke izinsizakusebenza zethu,” kusho uMnuz Magwaza.
Uthi ngoFebhuwari wangonyaka odlule, umyango waka Agri-Business nawo ongaphansi komasipala ngokusizana wabe usubakhela inusery, lapho bekhulisa khona izithombo neyaze yaphela ngenyanga ka June. “Baphinde babiya, bathumela nezinye izinsiza ezidingakalayo. Ngalokhu sikwaze ukwenza imali elinganiselwa ku R60 000 ngalezithombo,” kusho uMnuz Magwaza.
Uthi abakwenzelwe ileminyango kamasipala kwenze omkhulu umehluko njengoba nabo sebengabalimi abaziwayo futhi abahlonishwayo endaweni. Baphinde basungula amathuba omsebenzi entsheni yendawo. “Kulonyaka ngaphambi kokuba kuqale uthaqa, basithumelela umuntu ozosisiza asithuthukise ngolwazi (mentor) nokwenza omkhulu umehluko. Abaningi esasiqale nabo badikibala bashiya phansi kumfelandawonye njengoba babethi awuyi ndawo, manje sesisele sibahlalu, abasefazane abathathu kanye nabesilisa ababili kodwa sisaqhubeka sisebenza ngokukhulu uzikhandla lokhu,” kusho uMnuz Magwaza.
Ngokusho kukaMnuz Magwaza, babengeke bakwazi ukuphumelela bebodwa ngaphandle koxhaso lomphakathi abawakhele. “La eMzinyathi kuwadi 3, awukho umuzi ongenayo ingadi ngoba bathenga kithina izithombo. Ukukhula kwalomfelandawonye sekusidonsele uxhaso nasemnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha neMvelo KwaZulu-Natal,” kusho uMnuz Magwaza.
Izithombo abanazo kubalwa isipinashi kanye neklabishi. uMnuz Magwaza uthi kumanje balungisela ukutshala iklabishi elizovuthwa ngo August. Unxusa intsha ukuthi iwasebenzise amathuba avelayo kanti futhi ingawubukeli phansi umkhakha wezolimo ngoba unamathuba amaningi. “Ngidlulisa ukubonga kakhulu ku Agri-Ecology, Agri- Business nomnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha neMvelo KwaZulu-Natal ngoxhaso abasinikeze lona. Ngabe asikho la esikhona namhlanje nokuthi sikwazi ukudayisa imikhiqizo yethu emphakathini ngaphandle koxhaso lwaleminyango nokusicushisa ezintweni eziningi ngalomkhakha,” kuphetha uMnuz Magwaza.